ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ မုနျ့ပုံစံကနေ သိနိုငျမယျ့ ပငျကိုစရိုကျ
HomeKnowledgeရှေးခယျြလိုကျတဲ့ မုနျ့ပုံစံကနေ သိနိုငျမယျ့ ပငျကိုစရိုကျ
လူတှရေဲ့ပငျကို စရိုကျနဲ့ မသိစိတျက တိုကျရိုကျ ဆကျစပျနတေယျလို့ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ ယုံကွညျကွပါတယျ။ မသိစိတျကနေ ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ မုနျ့က သငျ့ရဲ့ အတှငျးစိတျနသေဘောထားကို ပွောပွပေးနိုငျပါတယျ။ ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ပုံက မုနျ့တဈခုဆိုတာထကျ ပိုပါတယျ။ တကယျတော့ စိတျနသေဘောထားကို ဖျောပွပေးနိုငျတာပါ။
သငျက အတှေးသမားဖွဈပွီး အရာရာကို ခှဲခွမျးစိတျဖွာကွညျ့ တတျပါတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြ တဈခုကို ခတြော့မယျ ဆိုရငျ သူမြားနဲ့ မတူတဲ့ ရှုထောငျ့ကနေ စဉျးစားပါတယျ။ အခြိနျဖွုနျး ရတာကို မုနျးပွီး အကြိုးရှိစမေယျ့ အလုပျတှေ လုပျရငျးနဲ့ပဲ အခြိနျကုနျ တတျပါတယျ။ သူမြားတှေ အရှုံးပေးထားတဲ့ အရာကို သငျက ဇှဲရှိရှိနဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျ ပါတယျ။ လကျတှကေ့ကြ ပွုမူ နထေိုငျတတျပွီး အရာရာကို စညျးစနဈတကြ ပွုမူတတျပါတယျ။
သငျဟာ တဈယောကျတညျး နရေတာကို သဘောကသြူပါ။ စိတျခံစားခကျြ တှကေို သူတဈပါးသိအောငျ မပွောပွဘဲ မြိုသိပျထားတတျ ပါတယျ။ တခွားသူတှရေဲ့ ခံစားခကျြတှေ ကိုတော့ အဓိပ်ပါယျကောကျယူတတျပါတယျ။ တဈခုခုဖွဈတော့မယျ ဆိုရငျ စိတျထဲမှာ အလိုလို သိနတေတျ ပါတယျ။ စာဖတျခွငျးက သငျ နှဈပေါငျးမြားစှာ သဘောကခြဲ့တဲ့ အရာပါပဲ။အလှနျ အေးအေးဆေးဆေး နတေတျတာက သငျ့ပုံစံပါ။
3. ဗဟုဂံ ပုံမုနျ့
သငျဟာ ဖနျတီးမှု၊ ပွနျလညျ ပွုပွငျမှုတို့ကို အလှနျ ဝါသနာ ပါပါတယျ။ စိတျဓာတျ တကျကွှတတျသူဖွဈပွီး အမြားက သငျ့ကို အာရုံစိုကျတာကို သဘောကပြါတယျ။ စကားပွောကောငျးသူဖွဈလို့ လူတှခေဈြခငျလာအောငျ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ အကောငျးမွငျစိတျ ရှိလို့ ဖနျခှကျထဲမှာ ရတေဈဝကျ ရှိရငျတောငျ ရောငျ့ရဲ ပြျောရှငျတတျ သူပါ။
သငျဟာ ခေါငျးဆောငျကောငျး တဈယောကျ ဖွဈဖို့ မှေးဖှားလာတာပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကို စိနျချေါယှဉျပွိုငျသူဖွဈပွီး အလုပျလုပျရငျ ငွငျးပယျတဲ့ စကားကို ဘယျတော့မှ မပွောပါဘူး။ ဘယျပွဿနာ မဆို သငျ့အတှကျ ဦးနှောကျ လကေ့ငျြ့ခနျး ပါပဲ။ ထိနျးခြုပျရတာကို သဘောကပြွီး လူတှအေပျေါ လှမျးမိုးနိုငျပါတယျ။
သငျ့မှာ ထူးခွားတဲ့ အရညျအသှေးတှေ ရှိပွီး အဲဒီအခကျြကပဲ သငျ့ကို လူသိမြားစေ တာပါ။ လူတှကေို ကူညီ ဂရုစိုကျ တတျပွီး သူတို့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေို နားထောငျပေးတတျ ပါတယျ။ သစ်စာရှိခွငျးက သငျ့ရဲ့အားသာခကျြပါပဲ။ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ လိုကျလြောညီထှေ နတေတျပွီး အနဈနာခံ တတျတဲ့ သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မုန့်ပုံစံကနေ သိနိုင်မယ့် ပင်ကိုစရိုက်
လူတွေရဲ့ပင်ကို စရိုက်နဲ့ မသိစိတ်က တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မသိစိတ်ကနေ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မုန့်က သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ်နေသဘောထားကို ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံက မုန့်တစ်ခုဆိုတာထက် ပိုပါတယ်။ တကယ်တော့ စိတ်နေသဘောထားကို ဖော်ပြပေးနိုင်တာပါ။
သင်က အတွေးသမားဖြစ်ပြီး အရာရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့် တတ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချတော့မယ် ဆိုရင် သူများနဲ့ မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ စဉ်းစားပါတယ်။ အချိန်ဖြုန်း ရတာကို မုန်းပြီး အကျိုးရှိစေမယ့် အလုပ်တွေ လုပ်ရင်းနဲ့ပဲ အချိန်ကုန် တတ်ပါတယ်။ သူများတွေ အရှုံးပေးထားတဲ့ အရာကို သင်က ဇွဲရှိရှိနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင် ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ ပြုမူ နေထိုင်တတ်ပြီး အရာရာကို စည်းစနစ်တကျ ပြုမူတတ်ပါတယ်။
သင်ဟာ တစ်ယောက်တည်း နေရတာကို သဘောကျသူပါ။ စိတ်ခံစားချက် တွေကို သူတစ်ပါးသိအောင် မပြောပြဘဲ မျိုသိပ်ထားတတ် ပါတယ်။ တခြားသူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ ကိုတော့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ် ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ အလိုလို သိနေတတ် ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းက သင် နှစ်ပေါင်းများစွာ သဘောကျခဲ့တဲ့ အရာပါပဲ။အလွန် အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်တာက သင့်ပုံစံပါ။
3. ဗဟုဂံ ပုံမုန်
သင်ဟာ ဖန်တီးမှု၊ ပြန်လည် ပြုပြင်မှုတို့ကို အလွန် ဝါသနာ ပါပါတယ်။ စိတ်ဓာတ် တက်ကြွတတ်သူဖြစ်ပြီး အများက သင့်ကို အာရုံစိုက်တာကို သဘောကျပါတယ်။ စကားပြောကောင်းသူဖြစ်လို့ လူတွေချစ်ခင်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းမြင်စိတ် ရှိလို့ ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတစ်ဝက် ရှိရင်တောင် ရောင့်ရဲ ပျော်ရွှင်တတ် သူပါ။
သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ မွေးဖွားလာတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ယှဉ်ပြိုင်သူဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရင် ငြင်းပယ်တဲ့ စကားကို ဘယ်တော့မှ မပြောပါဘူး။ ဘယ်ပြဿနာ မဆို သင့်အတွက် ဦးနှောက် လေ့ကျင့်ခန်း ပါပဲ။ ထိန်းချုပ်ရတာကို သဘောကျပြီး လူတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ ထူးခြားတဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိပြီး အဲဒီအချက်ကပဲ သင့်ကို လူသိများစေ တာပါ။ လူတွေကို ကူညီ ဂရုစိုက် တတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို နားထောင်ပေးတတ် ပါတယ်။ သစ္စာရှိခြင်းက သင့်ရဲ့အားသာချက်ပါပဲ။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေတတ်ပြီး အနစ်နာခံ တတ်တဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။